SomaliNet Magazine: JUUN 2002
CAAFIMAADKA - HEES: NUUJIYA CARRUURTA
Takhaatirtu markasta waxa ay hooyooyinka ku dhiiro galiyaan in ay carruurta naasaha nuujiyaan. Diinteena Islaamkuna sidaas ayay ina faraysaa. Faa?iidooyin aad u fara badan ayaa carruurtu ka helaan caanaha hooyada. Haddii aan la nuujinna waxa ay halis u yihiin in cudurro badani ku dhacaan. Abw
TAARIIKHDA - DAGAALKII SOOMAALIYA IYO ETHIOPIA (1977)
Dowladda Itoobiya waxaa ay la socotey diyaargarowga ciidameed iyo duullaanka ay soomaalidu damacsan yihiin. Meelo badan ayey wararka ka heli jireen, Waxaana ka mid ahaa shabakadaha jawaasiista ah oo soomaaliya gudaheeda
QURBAHA - XAALADDA DHAQAALE EE SOOMAALIDA MARAYKANKA
Labadii sano ee ugu dambaysay ayaa guud ahaanba dhaqaalaha Maraykanku sii xumaanayay. Markii dhaqaalaha waddanku hoos u dhaco waxaa yaraada shaqooyinka waxaana sare u kaca qiimaha badeecadda. Markii shaqooyinku yaraadaanna dadka dhibaatadu isla markiiba saamayso waa Qaxootiga iyo dadka kale oo
DHAQANKA - GEEDKA LA FARIISTO OO GARTA LAGU QAADO
Geedka la fariisto waa geed har weyn leh oo aan qorrax, qodax iyo qaniinyo toonna laheyn. Geedaha qaar bey xooluhu ku harsadaan. Halkaas waxaa ka abuurma cayayaan ka dhasha digada xoolaha oo uu kudkuduhu ka mid yahay. Geedka noocaas ahi, wuxuu ka mid yahay kuwa aanan la harsan. Haddii geedka u
FANKA IYO SUUGAANTA - GABAY: KUWA GAALADA U ADEEGA
Waxaa tiriyay. Cismaan Yusuf Kenadiid
Gabaygaan waxaa tiriyey abwaankii caanka ahaa ee Cisman Yusuf Kenadiid. Cisman Yusuf oo ahaa mu?allifkii iyo qoraagii fartii Cismaniyada waxa uu gabaygaan tiriyey wakhtigii xornimada la raadinayay. Abwaanku waxa uu la hadlayay dad markaas la saf
Idinka oo mahadsan maxaad igula talin lahaydeen. Waxaan ahay Gabar Soomaaliyeed, ku nool Yurub, waxaan internetka ka bartay wiil ku nool Canada, muddo ayaan waxaan is dhaafsanaynay e-maiilo iyo Telfoono. Run ahaantii waan kaa helay isaguna waxa uu sheegay in uu iga helay, maalintii aan is ba
DIINTA - 70-KA DANBI OO UGU WAAWEYN (AL-KABAIR)
Qaybihii hore waxaan soo bandhignay danbiyada waaweyn: Shirkiga, in uu qofku qof dilo, sixirka iyo salaadda oo laga tago.
Danbiga 5aad: Zakada oo aan la bixin.
Sidaan la socono Zakadu waa tiir ka mid ah tiirarka Islaamka. Haddii qof Muslim ahi uu rume
TAARIIKHDA - MATAANO LA ILAAWAY!
Bishan June ee aynu ku jirno iyo tan xigto ee July waxaa ku jira labada maalmood oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed baal dahab kaga jira laguna xusuuto jiritaanka iyo taariikhda xoriyadda Soomaaliyeed. 1-da July waxaa lagu xasuustaa maalinta xorriyadda Gobollada koonfureed ay ka qaateen gumays
MAXAA KU CUSUB MAGAZINE-KA? WAYDIIN, WARCELIN IYO ILA TALI
Bishii May markii aan magazine-ka ku soo darnay qaybta waydiin iyo warceli ayaa waxaa dad badan noo soo jeediyeen in lagu daro qayb ila tali, isla markaas waxaan helnay dhawr e-mail oo dad ay doonayaan in arrin lagala taliyo, sidaas ayaa ugu soo darnay qaybtaan iyo waliba annaga oo la xiriirna
ARRIMAHA BULSHADA - DHACDO RUN AH: QABIIL AYAA DUMIYAY QOYSKAYGII
Markii aan intaa iri ayuu Muqtaar farxad darteed is heyn kari waayey, wuxuuna isaga oo faraxsan igu yiri ?maanta wey iiga duwan tahay maalmaha waayo intii aanu dhameystirin hadalkii ayaan anigu kala hormaray waxaan weydiiyey sababta ay maanta uga duwan tahay maa
FANKA IYO SUUGAANTA - SHEEKO TAXANE AH: ALLA MA IYADIIBAA ALLA MA ISAGIIBAA?
Ahmed oo aad mooddo Sagaaro libaax ka hor booday, ayaa markiiba dhinicii waddada isu rogay ama u jeestay si uu u daawado magaalada.Waxay socdaanba waxa loo soo dhawaaday Dooxii Hargaysa,oo biyo badani ka durdurayaan, saxansaxo udgoona ka ifayso, iyo waliba shimbiro a
DIINTA - SU’AALIHII UGU YAABKA BADNAA EE LA WAYDIIYAY SH. CABDULLAAHI AL-NUURI IYO JAWAABOHOODII
Qaybihii hore waxaa la soconay qisadii labadii nin oo dilay wiilkii yaraa oo ay abtiga u ahaayeen kaddib mrkii ay arkeen in uu madow yahay (u ekayn aabihiis iyo hooyadiis midna) ayna ka baqeen in ceebi uga timaado. Gabadhii 18 jirka ahayd oo jeclaatay odayga 60 jirka ah, ka
ARIMAHA BULSHADA - ARRIN QOSOL IYO MURUGO LEH: SHIRKII QABQABLAHA IYO UMMADDA DHEX MARAY
Shir lagu qabtay Soomaaliya ayna ka soo qayb galeen xubno masalayay qaybaha bulshada Soomaaliyeed ugu muhiimsan oo kala ah:
1.	Oday dhaqameed
2.	Qabqable dagaal
3.	Wadaad dhallinyaro ah
4.	Aqoon yahan
5.	Nin dhallinyaro ah
7.	Qof dumar ah iyo
AQOON KORODSI - SU’AALIHII IYO JAWAABIHII BISHAAN
Waxaan ka cudurdaarnaynaa dadka aanaan su?aalahooda soo qorin. Waxaa jira su?aalo aan u dirnay dad aqoon u leh iyo su?aalo na soo gaaray intii magazine-ka la diyaariyay kaddib. Waxaan HRI ku talo jirnaa in aan bisha soo socota soo bandhigno. Waxaa kale oo aan idin xusuusinaynaa in haddii aan
Ayaan markii ay hooyadeed arrinta la socodsiisay, waxaa uga soo baxay in ay adagtahay in ay hooyadeed fahansiso dhibaatada waayo waxa ay ka hadlayso waa jacayl, waana adag tahay in dadka waaweyn lagu qanciyo in reerka la bur-bursho iyadoo ay sababtu tahay in aan jacayl jirin. Intii ay jidka
SIYAASADA - YAA DAGAAL OOGE AH: DOOD FURAN
Saacad kasta, maalin walba waxaa la is waydiiyaa dhibaatada waddankeenii ku habsatay Waxa sababay, cidda mas?uulka ka ah in ay dhibaatadii wali iska socoto oo la soo afjari waayo. Jawaabo kala duwan ayaa mar kasta looga jawaabaa arrintaa, marar badan waxaa carrabka lagu dhuftaa in dagaal oogay
CAYAARAHA - QUBANAYAAL (1)
Kooxda Kubbadda Cagta ee Twin Cities Stars oo ku guulaysatay koobka Balanbaalis
Tartan kubbadda cagta ah oo aad u qiimo badnaa ayaa maalmihii na soo dhaafay wuxuu si xamaasad leh uga socday magaalada Minneapolis, Iyada oo ay koobkaasi ay ku guulaysteen kooxda Twin Cities sta
CAYAARAHA - BARNAAMIJKA XIDDIGAHA: NUURADIIN CALI SACIID - QAYBTII 2 AAD
Qaybtii 2 aad
Shiikha: Marka laga soo tago Saciid geeseey oo ahaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee
kugu dhiirri-galiya kubbadda koleyga, Ma jireen cid kale oo aad dhiirri-galin ka heshay?
Nuuraddiin: Waa ay jireen waxaana dhiirri-galin aad u sarreysa aan ka he
CAYAARAHA - SENEGAL OO GUUSHII UGU HOORREYSAY U HORSEEDAY KOOXAHA AFRIKA
Kooxda kubbadda cagta ee Senegaal ( Afrika) ayaa guushii ugu horreysay la kulantay ciyaartii furitaanka ee koobka adduunka kaddib markii ay 1 iyo 0 uga adkaadeen kooxda haysata horyaalnimada koobka adduunka ee France.
CAYAARAHA - QUBANAYAAL (2)
Koobka Adduunka iyo Rajada Kooxaha Afrika
Sida aynu la wada soconno waxaa 31ka May ka billowday Dalalka Japan iyo Kuuriya tartankii ciyaaraha koobka adduunka ( World Soccer Championship). Tartankan isaga ah oo afartii sanoba mar la qabto waxaa sannadkan ku tartamaya 32 kooxood o